စင်ရော်တောင်ပံရိုက်သံ တစ်ချက်သည် ကမ္ဘာ့ရာသီ စက်ဝန်းကြီးတစ်ခုလုံး ကို ပြောင်းသွားစေနိုင်ကြောင်း လောရင့်က (Lorenz) ဆိုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ခတ်ခဲ့သော ရိုက်သံများသည် ရာသီစက်ဝန်းပြောင်းလဲ မှု၏ ခြေလှမ်းအစတစ်ခု ဖြစ်စေလိုသော အိပ်မက်မျိုးမက်ခဲ့ကြသူပေါင်း ထောင်သောင်းမက ရှိကြပါလိမ့်မည်။ အိပ်မက်များ ရှင်သန်ထမြောက်ဘို့ ကျွန်တော်တို့၏ အိပ်မက်များ ပေါင်းစည်းကြိုးစားကြပါစို့။
Is there tyranny in Myanmar?
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစံနစ်များကို နှိုင်းယှဉ်မှုကြရာမှာ ပြသနာတက်ကြတဲ့အရာတစ်ခုက အုပ်ချုပ်မှုစံနစ်တစ်ခုကို တိတိကျကျနဲ့ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ် ပြီးတော့ ခေါ်ဆိုလို့ မရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုခောတ် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ အဆိုးရွားဆုံးလို့ ခေါ်လို့ရတဲ့ အုပ်ချုပ်မှု စံနစ်များ၊ အဲဒီ့စံနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံများကို အရှိကို အရှိအတိုင်း ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ကြဘို့ နောက်တွန့်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Tyranny လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုးညစ်လွန်းလှတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစံနစ်နဲ့၊ အဲဒီ့စံနစ်ကို ကျင့်သုံးအုပ်ချုပ်ကြတဲ့ အာဏာရှင်တွေကို ပုံစံဖော်ပြကြတဲ့ နေရာမှာ ယခုမျက်မှောက်ခေတ် နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့ ချယ်မှုန်းဖော်ပြမှုဟာ ရှေးခေတ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ အရစ္စတိုတယ် ၊ လေ(လ်)လား (Lilla) အစရှိသူတို့ရဲ့ ချယ်မှုန်းဖော်ပြမှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံကြရမှာပါ။
အရက်စက်ဆုံး ၊ အကြမ်းကြုတ်ဆုံး စံနစ်များနဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံများရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ တွေကို သင့်တင့်မျှတတဲ့၊ အလယ်အလတ် ကျကျ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ များအဖြစ်ပြောင်းလဲလာစေရေး ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီဟာ အနောက်လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများအတွင်းက နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒချမှတ်သူ များရဲ့ တူညီစွာ စွဲကိုင်ထားတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရစ္စတိုတယ်ရေးသားခဲ့တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်တစ်ခုရဲ့ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ တရားရေး စံနစ်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရေး အဆိုအမိန့်တွေဟာ ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ အသုံးဝင်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အာဏာရှင် စံနစ်များ အား အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရာမှာ အသုံးဝင်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အရစ္စတိုတယ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်စံနစ်များအကြောင်းကို အနည်းငယ်လေ့လာ လိုက်ကြရအောင်လားခင်ဗျား။
၁ - Hereditary tyranny လို့ခေါ်တဲ့ အာဏာရှင်တစ်ဆက်ကနေ နောက်တစ်ဆက် ဆင်းသက်လာတဲ့ အုပ်ချုပ်မှု
- ဘုရင်တစ်ပါးကဲ့သို့ အာဏာထပ်တူရှိသည်။
- အာဏာရှင်၏အုပ်ချုပ်မှုကိုအုပ်ချုပ်ခံ လူတန်းစားများက လက်သင့်ခံမှုရှိသည်
- အရှင်သခင့် အလိုသဘောအတိုင်းပင် အုပ်ချုပ်သည်။
- အုပ်ချုပ်သူမှာ အများအားဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပြည့်အ၀ရှိသည့် ပဒေသရာဇ် ဧကရာဇ်များ
- အချုပ်အခြာအာဏာသည် ဥပဒေအပေါ်တွင်သာအခြေခံသည်
- ကျွန်ပိုင်ရှင်စံနစ်ကဲ့သို့ ပုံစံမျိုးနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်သည်။
၂ - Elective Tyranny ဟုခေါ်သည့် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်း ခံထားရသည့် အာဏာရှင်
- အုပ်ချုပ်သူမှာ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံထားရသည့် အာဏာရှင်ဖြစ်သည်။ (တစ်သက်လုံး ရာထူးယူထားခြင်း)
- ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံများတွင် Elective Tyranny စံနစ်တည်ရှိခဲ့သည်။
၃ - Common brutish tyranny (အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် အာဏာရှင်စံနစ်)
- သက်ဦးဆံပိုင် အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင် ဘုရင်စံနစ်နှင့် တူသည်
- အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားများ၏ ထောက်ခံမှုမရရှိပါ။
- ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားခြင်း၊ အမွေလက်ခံရယူထားသည့် အာဏာမျိုးမရှိ
- အချုပ်အခြာအာဏာသည် ဥပဒေနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်ထားခြင်းမဟုတ်
- အလုံးစုံနီးပါး ရက်စက်စွာပင် ထိန်းချုပ်မှုပြုထားသည်။
အထက်ပါ အာဏာရှင် စံနစ် သုံးမျိုးသုံးစားထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ common brutish tyranny ထဲမှာ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ပါတယ်။ အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ အဆိုအမိန့်များနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်ကြရအောင်လားခင်ဗျာ။
အခြားသူများထက် သာလွန်ထူးချွန်သောသူများကို ဖယ်ရှားပြီး အတွေးအခေါ်မြင့်မားသူများအား သုတ်သင်ပါ။ လူစုလူဝေးနှင့်ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ၊ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့ သဘောတရားရေးရာရှိသော ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းအား လုံးဝခွင့်မပြုရန်၊ အတွေးအခေါ်မြင့်မားမှုနှင့် လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးယုံကြည်မှုပေါ်ပေါက်လာနေစေနိုင် သည့် အရာအားလုံးအား တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စောင့်ကြည့်ရန်။ အားလပ်ချိန်အတွင်းပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများအား ခွင့်မပြုရန်၊ သို့မဟုတ် အားလပ်ချိန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် တွေ့ဆုံမှုများ ပိတ်ပင်ရန်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံခြင်း မပြုနိုင်ရန်၊ အသိဥာဏ်တုံးနိုင်သမျှတုံးစေရန် ဆောင်ရွက်ပါ။ အသိဥာဏ်ပညာသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးယုံကြည်မှုကို ပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်သော ကြောင့် အသိဥာဏ်တိုးပွားလာစေနိုင်သည့် အရာဟူသမျှအား ပိတ်ပင်ပါ။
အရစ္စတိုတယ် (နိုင်ငံရေး စာစဉ် ၅၊ 1313a40-1313b6)
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို လက်စတုံးပစ်တာတွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကို နှိပ်ကွပ်ပစ်တာတွေဟာ တပ် - မတော် ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစံနစ်အောက်က ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်များသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးတာ၊ သတ်ပစ်တာနဲ့ နေ့မြင်ညပျောက်ဖြစ်သွားရ တာတွေဟာ မြန်မာနိုင်မှာ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ကို အများကြီးပါပဲ။ လူငါးဦးထက် ပိုမစုရဘူးဆိုတဲ့ အမိန့် နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ပါတီဝင်တွေကို နှောက်ယှက်မှုပြုတာတွေဟာ အရစ္စတိုတယ်တောင် ထိုင်ငိုသွားရအောင်ကို မြန်မာအဆိုးရက ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်ကြီး ပြုလုပ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အတွေးအခေါ်မြင့်မားမှုနဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးယုံကြည်မှုဆိုတာရော မြန်မာတွေရဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ရှိပါသလားခင်ဗျား။
မြန်မာပြည်ရဲ့ Social Capital လို့ခေါ်တဲ့ လူတန်းစားတစ်ခုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ် အပိုင်းမှာ ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ ပြသနာကြီးတစ်ခုကတော့ လူတစ်ဦးကိုတစ်ဦး ယုံကြည်နိုင်မှုမရှိခြင်းဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလိုတစ်ဦးကို တစ်ဦးယုံကြည်နိုင်မှုမရှိနိုင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ မြန်မာပြည်က ကလေးငယ်များကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ ပညာရေးစံနစ်က ကလေးငယ်တွေကို သူတို့ မိသားစုဝင်တွေကိုပဲ ယုံကြည်ပြီးတော့ သစ္စာရှိဘို့နဲ့ လူစိမ်းမှန်သမျှကို သံသယအမြင်နဲ့ မြင်စေဘို့အတွက် ပဲ အခြေခံထားပြီးအလေးပေးဆောင်ရွက်ထားခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ့အတွက်ကြောင့် နောက်ထပ်ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ မြန်မာတွေဟာ objective လို့ခေါ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ပြီးတော့ လုပ်ကိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးတွေ ၊ လူတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးစံနစ်တွေ အတွက် စည်းကမ်းတစ်ကျချမှတ်ထားတဲ့ စံနစ်ပုံစံတွေနဲ့ ကြုံတွေလာရတဲ့အခါမှာ သဟဇာတမဖြစ်ကြ တော့ဘူုးလို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ ရှင်သန်နေတဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ယုံကြည်နိုင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲ မြန်မာတွေဟာ အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ အပေါ်မှာ တစ်ကယ်တမ်း သစ္စာရှိစွာ ပေးအပ်စတမ်း၊ ဆောင်ရွက်ကြစတမ်းဆိုတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေပြေ လုပ်ကိုင်နိုင်တာ မရှိသလောက်ရှားပါးလာရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ လူမျိုးစုသေးသေးကလေးအပေါ်၊ ရွာနီးချုပ်စပ်အဖွဲ့လောက်သာ သစ္စာရှိနိုင်ပြီးတော့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ နိုင်ငံရေးအသင်းအဖွဲ့လိုမျိုးမှာ ညီညီညွတ်ညွတ်၊ အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ကိုင်နိုင်ဘို့ဆိုတာ ရှားလှပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီအချက်တွေအားလုံးရဲ့ ပင်မရေသောက်မြစ်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစံနစ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ မှားနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးခင်ဗျား - - -
Posted by Country Builder at 12:17 PM4comments:
For those who are shouldering the Country's Responsibility and who are about to
ဂျုံး ကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ သမိုင်းဘာသာရပ်ကို သင်ကြားတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ ဂျုံးက သူ့အတန်းသားတွေကို ထိုင်ခုံနေရာ အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ မှတ်စုတွေထုတ်ဘို့ရာအတွက် ခဲတံနဲ့ စာရွက် အသစ်ယူလာရမယ်၊ မေးခွန်းတွေမေးရင် ခုံဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ ဖြေရမယ် စတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ထုတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဂျုံးဟာ အတန်းသားတွေအတွက် အလေးပြုနည်းတစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီ့အလေးပြုနည်းဟာ တတိယလှိုင်း လို့ခေါ်တဲ့ အလေးပြုနည်း ဖြစ်ကြောင်းကို လဲ သူ့အတန်းသားတွေကို အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ့နောက်မှာ ဂျုံး ဟာ အတန်းသားတွေအတွက် ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တတိယလှိုင်း ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီ့အစီအစဉ်ဟာဖြင့် နိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာဘို့ကို လိုလားတဲ့ ကျောင်းသားများပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ကြောင်း ပြီးတော့ လာမဲ့ သောကြာနေ့ နေ့လည် ထမင်းစားချိန်မှာ တတိယလှိုင်းလှုပ်ရှားမှု အသင်းဝင်များသာ ပါဝင်နိုင်တဲ့ လူထုအစည်းအဝေး ပုံစံတွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
သောကြာနေ့မှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဂျုံးတွေ့နေရပါပြီ။ ဂျုံးဟာ မတ်တပ်ရပ်၊ မိန့်ခွန်းအနည်းငယ်ပြောလိုက်ပြီးတော့ တတိယလှိုင်း အလေးပြုနည်းပုံစံနဲ့ အလေးပြုလိုက်တဲ့ အခါမှာ ပုံစံတူအလေးပြန်ပြုလိုက်တဲ့ လက်မောင်းပေါင်း ၂၀၀ကျော်ကို လေထဲမှာ တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။
တတိယလှိုင်း အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဂျုံးဆက်ပြောခဲ့တာတွေကတော့
တတိယလှိုင်းလှုပ်ရှားမှု ဆိုတဲ့ လူငယ်ထုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုးဟာ အမှန်တစ်ကယ်ရှိတဲ့ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု မဟုတ်တဲ့အကြောင်း
ယခု တတိယလှိုင်း အလေးပြုမှုပုံစံနဲ့ အလေးပြုနေကြတဲ့ သူများဟာ အသုံးချခံ၊ အစမ်းသပ်ခံ ၊ အစတေးခံရမဲ့ လူများသာဖြစ်ကြောင်း
သူအမှန်တစ်ကယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ စမ်းသပ်မှုဟာ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်က ဂျာမန်နာဇီများ မည်ကဲ့သို့ လူတွေကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို လေ့လာနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့
ယခုအလေးပြုနေတဲ့ သူများဟာ ဂျာမန်နာဇီများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘာမှပိုပြီးတော့ ဦးနှောက်ရှိတဲ့ သူများမဟုတ်ကာ ထူးမခြားနား သာဆိုးသူများသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတော့တယ်။
တတိယလှိုင်းလူထုအစည်းအဝေးကြီး ပြုလုပ်နေတဲ့ ကွင်းပြင်ထဲမှာတော့ တိတ်ဆိပ်မှုသာ ကြီးစိုးနေပါတော့တယ်။
စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်သွားတဲ့ ဂျုံးရရှိသွားတဲ့ အခကြေးငွေကိုတော့ ထည့်ပြောစရာမလိုတော့ ပါဘူးခင်ဗျား - - -
- - အဟမ်း အဟမ်း၊ - - အနာဂတ်မှာ ပုခုံးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့ ရဲဘော်တို့ဟာ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်နဲ့ နိုင်ငံရေးအသိတွေ အမြဲရှိနေဘို့လိုတယ် - - အဟွတ် - -အဟွတ် - - ဘလာ ဘလာ ဘလာ - - ဘလာ ဘလာ - - ရဲဘော်တို့သာလျှင် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်၊ စောင့်ရှောက်၊ အမျိုး ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ - - အဟမ်း အဟမ်း၊ အဟွတ်၊ အဟွတ် - -
- ဒါမျိုးအပြောခံခဲ့ရဘူးတဲ့ ကောင်တွေ ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ ကောင်တွေကို မေးခွန်းလေးတွေ မေးချင်ပါတယ်။
ဘာတာဝန်တွေကိုများ ပုခုံးပြောင်းယူနေကြတာလဲ၊ ဘာတွေများ နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်လာလို့လဲ၊ တတိယလှိုင်းကျောင်းသားတွေဟာ နာဇီတွေထက်ဆိုးတယ်ဆိုရင် အနာဂတ် တာဝန်ကို ယူကြမဲ့ ကောင်တွေကတော့ နာဇီ လောက်တောင် အဆင့် နဲ့ ဦးနှောက် မရှိတဲ့ ၊ နာဇီတွေလို ဥရောပတစ်တိုက်လုံးနီးပါး လွှမ်းမိုးနိုင်ဘို့ မပြောနဲ့ တရုတ်ပျက် ၀ လိုကောင်စားမျိုးတွေတောင် နိုင်အောင် မတိုက်နိုင်တဲ့ ကောင်စားမျိုးများသာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ စမ်းသပ်မှု မလုပ်ပဲ သိနိုင်တာပေါ့ဗျာ။
နိုင်ငံတော်ကို ဒါမျိုးကောင်စားများကတစ်ကယ်တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်၊ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိမရှိဆိုတာကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ ကျူးကျော်စော်ကားမှုတွေ၊ ၀ အမည်ခံ တရုတ်တွေရဲ့ လူလည်ကျ ခြေကုပ်ယူမှုတွေနဲ့၊ သူတောင်းစားသာသာ ငတ်တစ်လှည့် ပြတ်တစ်လှည့် ဖြစ်နေကြတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် အဖြေဟာ ဘာလဲဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲ မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျား - - - -
Posted by Country Builder at 10:00 AM No comments:
Let's wait and see in this recession?
စီးပွားရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေဟာ နိုင်ငံတစ်ခုခုမှာ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ပေါ်ထွန်းလာမှုနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိသလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ အလွန်ပဲရှုပ်ထွေးပြီးတော့ ဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအရ တိုးတက်မှုတွေ၊ ကျဆင်းမှုတွေအပြင် အဲဒီ့စီးပွားရေးအရပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပျက်တဲ့အချိန်ကာလနဲ့ နေရာဒေသကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဖြစ်ထွန်းမှုကို ဆက်စက်မှုရှိ တယ်လို့ ယူဆနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ၊ အလွန်အမင်းဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှုတွေဟာ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ပေါ်ထွန်းလာမှုနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးအရဖြစ်ပျက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေသာချည်းပဲဆိုရင်တော့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာဘို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို မပေးစွမ်းနိုင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးပြောလို့ရတာတစ်ခုကတော့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်တစ်ခု အမှန်တစ်ကယ်ပေါ်ထွန်း လာဘို့အတွက် စီးပွားရေးအရ ပြောင်းလဲဘို့တောင် မလိုအပ်ဘူးလို့ တစ်ချို့ ပညာရှင်များက ယူဆထားကြပါတယ်။
၁၉၇၄ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အာဏာရှင်စံနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်ကို ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ နိုင်ငံများကို တတိယလှိုင်း (Third Wave) ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများလို့ ပညာရှင်တွေက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီတတိယလှိုင်း ဒီမိုကရေစီထွန်းကားလာမှုအပေါ်မှာ စီးပွားရေး နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေက နည်းလမ်း(၃)မျိုးနဲ့ လွှမ်းမိုးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်က ၁၉၇၄ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်များအတွင်း နိုင်ငံတစ်ချို့မှာ ရေနံဈေးနှုန်း အလွန်အမင်းကြီးမြင့်လာခြင်းနဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံများမှာတော့ မာ့စ် ၊ လီနင်ဝါဒရဲ့ ကန့်သတ်ချက် တွေကြီးကြီးမားမားရှိနေတဲ့ အချက်တွေကနေအစပြုပြီးတော့ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဟာ အာဏာရှင်စံနစ်များကို အားနည်းလာစေခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ချက်က ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ် အစပိုင်းမှ အစပြုကာ နိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်လာမှုဟာ အဲဒီ့နိုင်ငံများအတွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းလာဘို့အတွက် အုတ်မြစ်တွေအနက်က တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ တစ်ချို့သောနိုင်ငံများမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ တစ်ရှိန်ထိုး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ အာဏာရှင်စံနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံများမှာ အာဏာရှင်များကို အခြေယိုင်စေခြင်း၊ သို့ ဖိနှိပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလာစေခြင်း အစရှိတဲ့ အချက်တွေကို ပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့ပါတယ်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်ပြောလို့ရတာကတော့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဒီမိုကရေစီစံနစ်တစ်ခုအတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်ကောင်းတွေကို ချပေးနိုင်ပြီးတော့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကတော့ အာဏာရှင်တွေကို အခြေယိုင်စေနိုင်တဲ့ အချက်ပါပဲ။ တတိယလှိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ကူးပြောင်းလာတဲ့ နိုင်ငံများအားလုံးဟာ အထက်ပါ အချက် ၃ခုထဲက တစ်ခုခုနဲ့ ကိုက်ညီနေတာချည်းပဲဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဟာ ၁၉၃၀ပြည့်နှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးပြီးရင် အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆထားကြတဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ ပြသနာတွေ၊ အဲဒီ့ပြသနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ဖြစ်ပျက်လာမဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဟာ ပေါ့သေးသေးပြသနာတစ်ခု မဟုတ်တာကို တော်တော်များများ နားလည်ကြပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဟာ ၂၀၀၉ခုနှစ် ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ အောက်ဆုံးအထိလောက်ကို ရောက်မယ်လို့ တစ်ချို့ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျား။ ၂၀၀၉ မကျော်မှာကို စိုးရွံ့နေတဲ့ မြန်မာအာဏာရှင်များဟာ ယတြာမြောက်မြားစွာကို ယခုအချိန်မှာ ပြုလုပ်နေပြီးဖြစ်လောက်ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာဏာရှင်များနဲ့ ဝေဒပညာရှင်များရဲ့ စီးပွားပျက်ကပ်ကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ ကျွန်တော်များအနေနဲ့ကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထိုင်စားလို့ရအောင် ကြိုတင်စုဆောင်းထားတဲ့ ယတြာချေ ထားပြီးဖြစ်တာမို့ ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လားခင်ဗျာ။
Posted by Country Builder at 5:07 PM No comments:
Budget Deficits, Why?
ယခုနှစ်ပိုင်းများအတွင်းမှာ အဆိုးရဟာ အခွန်ငွေကောက်ယူမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေ၊ အစိုးရ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ သွင်းကုန်အခွန်စည်းကြပ်မှု တွေအားလုံးအပေါ်မှာ ၂၀၀၄ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၀၆ခုနှစ်များအတွင်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတော်တော်များများ ပြုလုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်လို့ IMF ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ သွင်းကုန်အခွန်စည်းကြပ်မှုတွေမှာ အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာကို ပြင်ပပေါက်ဈေးဖြစ်တဲ့ မြန်မာငွေ ၁၂၅၀ ကျပ်နှုန်းသတ်မှတ်ပြီးတော့ အခွန်ကောက်ယူမှုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ အပေါ်မှာ ကောက်ယူတဲ့ ၀င်ငွေခွန်ဟာ သိသိသာသာတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားသားပိုင် လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာ ကောက်ယူခဲ့တဲ့အခွန်ဟာ လဲ သိသိသာသာတိုးမြင့်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးအခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ အဆိုးရကောက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ အခွန်ငွေဟာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၇၆၇၄၂ သာရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၆-၂၀၀၇ခုနှစ် တတိယသုံးလပတ် ဘဏ္ဏာရေးလိုအပ်ချက်ရဲ့ ၂၆% ကိုသာလျှင်ပြည့် မှီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ IMF ကဆိုထားပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်မှာ ကောက်ယူရရှိလာတဲ့ အခွန်ငွေဟာ နိုင်ငံ့ထုတ်ကုန်စုစုပေါင်းရဲ့ ၄%ကျော်မျှသာပဲရှိကာ တစ်ခြားဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရဲ့ ၀င်ငွေဖြစ်တဲ့ ၁၈% ကျော်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် အလွန်ကိုနဲပါးနေတာကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားငွေရရှိမှုဟာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များရောင်းချခြင်းပေါ်ကနေအဓိကရရှိ နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရရှိလာတဲ့ ၀င်ငွေများဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဏာရေးလိုငွေပြမှုကို တားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ IMF ကဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအကြောင်းအရာဟာ ဆိုးရွားစွာချမှတ်ထားတဲ့ စံနစ်များနဲ့ ချစားမှုကြောင့်သာ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုးရစာရင်း ဇယားများမှာ အသုံးပြုတဲ့ ငွေကြေးလဲလှယ်မှု နှုန်းထားဟာ ယခုအချိန်အထိ အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာကို ၆ကျပ်ပဲ ဖြစ်နေပြီးတော့ ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းချရာက ရရှိလာတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၂၅ ဘီလီယံကျော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ္ဏာရေးလိုအပ်ချက်ရဲ့ ၀.၆ % ကိုပဲ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာ မြန်မာပြည်ဆင်းရဲတွင်းနက်ထက်နက်လာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းများထဲက တစ်ခုပါပဲခင်ဗျာ။ ရလာတဲ့ ဒေါ်လာကို အိပ်ထောင်ထဲထည့် စက္ကူလောက်တောင်တန်ဘိုးမရှိတဲ့ မြန်မာငွေကို ဘဏ္ဏာရေး ဘတ်ဂျက်ထဲကို ပြန်ထည့်ပေးကာ လိုအပ်သမျှငွေကို ရိုက်ထုတ်ပစ်မှတော့ မြန်မာပြည်သူများ မှ မမွဲရင် တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘယ်သူမှ မမွဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ကို သေသေချာချာကြီး ကျွန်တော်တို့ ပြောနိုင်တာပေါ့ခင်ဗျာ။
Posted by Country Builder at 2:10 PM No comments:
The source of all economy maladies in Myanmar
မြန်မာပြည်က ပြည်သူပြည်သားများရဲ့ လုပ်အားသွေးချွေးများကြောင့် ထွက်ရှိလာတဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားတွေကို နိုင်ငံတော်အတွက်လို့ ခေါ်ခေါ်နေကြတဲ့ အကျိုးမရှိတဲ့ နေရာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတဲ့ အချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအား ဖိစီးထားတဲ့ စီးပွားရေး ပြသနာကြီးရဲ့ အဓိက အရင်းအမြစ်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ တစ်ခြား စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပြသနာ ပေါင်းစုံရဲ့ အဓိကတရားခံဟာ အဲဒီ့နိုင်ငံတော်လို့ခေါ်တဲ့ လူ့ငနွားများရဲ့ ကပ်ပါးခိုမှု တစ်ချက်တည်း ကြောင့်ဖြစ်ပျက်နေရခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်လို့တောင် တိတိကျကျဆိုနိုင်ပါတယ်။ တပ် - မတော် ရဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးအပေါ်မှာ ဖိစီးထားမှုနဲ့ လောဘတက်မှုဟာ greed ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့တင်မလုံလောက် တော့ပဲနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေဆီမှာသာ ရှိတဲ့ rapacity လို့ခေါ်တဲ့ အဆင့်မျိုးကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစီးပွားရေးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံစံဟာ ကျွန်တော်တို့ Discovery လိုမျိုး အစီအစဉ်တွေမှာ တွေ့တွေ့နေရတဲ့ နွားတွေနဲ့ ကျားတွေလိုပုံစံမျိုးပါပဲ။ အစာ ဆာ လာတဲ့အချိန်မှာ နွားတစ်ကောင် သတ်စားလိုက်ပါတယ်။ ဗိုက်ဝရင်ကျန်တဲ့ နွားသေဟာ ပုတ်သွားတာပါပဲ။ ကျားစားတာနဲ့ ပုတ်သွားတာ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ပုတ်သွားတာက အများကြီးပိုများနေတဲ့ ပုံစံဟာ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖြစ်ပျက်နေပုံမျိုးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ခွေးတပ်ကို ပံ့ပိုးနေရတဲ့အတွက် ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေ ကတော့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ဆုံးရှုံးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံး သွားရတာလဲ အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုအတွက် ငွေကြေးရိုက်ထုတ် သုံးစွဲရပါတယ်။ ခွေးစာကျွေးနိုင်ဘို့အတွက် ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းထားက ၂မျိုး ၂စားဖြစ်နေရပါတယ်။ ဘဏ်များမှာအပ်နှံထားတဲ့ ငွေများရဲ့ အတိုးနှုန်းကို အတင်းဖိနှိပ်ထိန်းချုပ်ရပါတော့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကရိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ငွေကြေးလိုငွေပြမှုကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ က အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
Posted by Country Builder at 11:24 AM No comments:
Wholly Predatory Economy?
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရ ပါတယ်တဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထိရောက်တဲ့ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေး လုံးဝမရှိပါဘူး။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ ဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိသလားဆိုတော့လဲ လုံးဝမရှိပါ။
Macro Economic နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေးပေါ်လစီတွေကလဲ ကြုံရာ ကျပန်း ပေါက်လွှတ်ပဲစား ချမှတ်တာပါပဲတဲ့။ ပေါက်လွှတ်ပဲစားချမှတ်ထားတဲ့ ပေါ်လစီတွေဟာ သောက်တစ်လွဲတွေဖြစ်နေယုံသာမက ပြည်သူလူထုကို အသိပေးတင်ပြမှုဆိုတာကလဲ မရှိသလောက်ပါပဲ။
လိုအပ်တဲ့ အဆိုးရအသုံးစားရိတ်မှန်သမျှကို ဖြေရှင်းပေးတဲ့ စံနစ်က စာရွက်များကို ပိုက်ဆံ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ရိုက်ထုတ်ပေးခြင်းနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းပါတယ်တဲ့။ အဲဒီ့အတွက်ကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းတွေ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေ ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကမောက်ကမဖြစ်မှုတွေ နှစ်စဉ်နဲ့ အမျှ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာဟာလဲ လမ်းဘေးက ခွေးတောင်သိပါတယ်။
ချစားမှုဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမှတ်စဉ် (၁) နဲ့ (၂) နေရာကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ယူနေကြဖြစ်တဲ့ အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေး စားရိတ်သုံးစွဲမှုဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ တွေထဲမှာ အနည်းဆုံး ဖြစ်နေတဲ့အပြင် နောက်ထပ်အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ အသုံးစားရိတ်နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်တောင် တစ်ဝက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒီစံနစ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဆီရီယာလီယွန်း နိုင်ငံပြီးရင် အဆိုးဝါးဆုံးပါပဲလို့ UNICEF က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ပညာရေး မှာတော့ရော - ကျေးလက်နေပြည်သူများ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းဟာ ကိုလိုနီခောတ်ကနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်ကို ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဝက်မပြည့်တော့ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျား ။
အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ ရှက်ကြောက်မှုဆိုတာ လုံးဝမရှိတဲ့ အဆိုးရရဲ့ အောက်ဆွဲများကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနှစ်စဉ် တိုးတက်မှုမှာ ဂဏန်း၂လုံး ရှိတယ်လို့ အရှက်မရှိပြောနေကြဆဲပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိရရှိနေတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ နယ်ပယ်တွေထဲကိုပဲ လှိမ့်ဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေက ရရှိလာတဲ့ အလုပ်အကိုင်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာမှု ဟာ အလွန်ပဲ နည်းပါးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု Skill များ မြန်မာပြည်သူများ လက်ထဲကို ရောက်ရှိလာမှုဆိုတာကလဲ မရှိသလောက်ပါပဲတဲ့။
နိုင်ငံတစ်ခုဟာ အမှန်တစ်ကယ်စီးပွားရေး ပြောင်းလဲနေတာဟုတ်မဟုတ်ကို ညွှန်ပြတဲ့ ဂျီဒီပီတစ်ခုလုံးမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ (Manufacturing and processing sector) ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာ ၁၃% မျှသာရှိပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံက ၃၅% ၊ တရုတ်ပြည်က ၄၂% နဲ့ ဒေသတွင်းမှာ နောက်ထပ်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ ၁၉% နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့် လိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အောက်ဆွဲများပြောနေသလို စီးပွားရေးတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ကွင်းကွင်းကြီးမြင်နိုင်ပါတယ်။
ပိုပြီးဆိုးတဲ့ အရာတစ်ခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကို အိမ်နီးချင်းအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကပါ ကောင်းကောင်းကြီး ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်ကြခြင်းပါပဲ။ သူတို့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုး လုပ်ကြသလဲဆိုတော့ အဲဒီ့နိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင်ကပဲ မိမိအကျိုးစီးပွားပဲ ကြည့်ကြတဲ့ အာဏာရှင်ဆန်ဆန်နိုင်ငံ တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲတဲ့။
စီးပွားရေးပညာရှင်များ ဆိုကြတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး လုပ်နေကြရတာဟာ (wholly predatory economy) လို့ခေါ်တဲ့ လိမ်ညာသတ်ဖြတ် အနိုင်ကျင့်စားသောက်ကြရတဲ့ ကပ်ပါးကောင်စီးပွားရေးပါတဲ့။ တစ်ခြားအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာ လဲဒီလိုမျိုးခေါင်းပုံဖြတ်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံက အာဏာရှင်တွေဟာ သွေးစုတ်တာတောင်မှ အစုတ်ခံနေရတဲ့ သူ သေမသွားဘို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုလောက်ကိုတော့ သဘောပေါက်ကြသေးတယ်လို့ ပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။
စီးပွားရေး ပညာရှင်များနှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံက အာဏာရှင်တွေဟာ တစ်ပါးသူတွေကြိုးစားမှုကြောင့် ရရှိလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်ပေါ်မှာ ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ racketeer တွေဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက သူတောင်းစားများကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲ မလုပ်နိုင်၊ မလုပ်တဲ့၊ နားမလည်တဲ့ အရာတစ်ခုခုဆိုရင် ဖျက်ဆီးပစ်ဘို့ သာတတ်တဲ့ လုယက်ဖျက်ဆီးသူ looters များသာဖြစ်ကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြထားတယ်လို့ ပြောကြားရင်း -
Posted by Country Builder at 1:04 PM No comments:
What we are needed for reviving Our Mother Land's economy?
ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေးတွေကို အသိအမှတ်ပြုတာတွေ၊ ဥပဒေအရ အုပ်ချုပ်မှု ပြုလုပ်တာတွေ နဲ့ အပြိုင်လိုအပ်နေတဲ့ အရာတွေကတော့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် "Peoples Voice" နဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ပေးအပ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေ ပါဝင်ရမလဲဆိုတော့ အခြေခံ အကျဆုံး လူ့အခွင့်အရေးများရရှိမှု (basic civil liberties) လွပ်လပ်စွာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့် (Freedom of Press) အသင်းအဖွဲ့များ လွတ်လပ်စွာတည်ထောင်နိုင်ခွင့် အစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Basic civil liberty ရဲ့ အဓိကအကျဆုံး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကတော့ ပြည်သူများအား အစိုးရတစ်ရပ်၏ မတရားပြုကျင့်မှုခံရခြင်းမှ အကာအကွယ်ပေးခြင်း လို့ ကောက်ဆိုလို့ရပါတယ်။ ည (၁၀)နာရီ ရောက်ရင် ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံလိုမျိုးမှာ အခြေခံ လွတ်လပ်ခွင့် ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာ တွေးကြည့်စရာတောင် မလိုပဲနဲ့ သိနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ လွပ်လပ်ခွင့် နဲ့ စီးပွားရေး ဘာဆိုင်လို့လဲ မေးစရာရှိပါလိမ့်မယ်။ ည ၁၀နာရီဆိုင်ပိတ်တဲ့အတွက် ဈေးမရောင်းရ၊ ဈေးမရောင်းရတဲ့အတွက် ၀င်ငွေမရှိ၊ ၀င်ငွေမရှိတော့ စီးပွားရေးကျတယ်လို့ ညည်းနေကြတဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များတောင် ဒီဆက်စပ်မှုကို သဘောပေါက်နိုင်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို အခြေခံ လွတ်လွပ်ခွင့်တွေ၊ လွပ်လပ်စွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်များပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ ပေါ်လစီများပေါ်ပေါက်လာစေဘို့အတွက် တွန်းအားပေးတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ချစား လာဘ်စားမှုများကို လျော့ပါးနိုင်စေတယ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချ နိုင်တဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀န်းတစ်ခုကို ပေါ်ပေါက်လာစေတယ်။ ထင်ရာစိုင်းပြီးတော့ မြေယာ သိမ်းယူမှုတွေ ၊ အဆောက်အဦး သိမ်းယူမှုအစရှိတာတွေကို နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မှာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ် - အစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
တွေ့သမျှမြေကွက်ကို လက်ညိုးထိုး ခွဲဝေယူနေကြတဲ့ လက်ရှိအဆိုးရအဖွဲ့ ၀င်တွေရဲ့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအပေါ်မှာ အပြင်းအထန်ကန့်သတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်းဟာ အဆိုးရအရှက်မရှိ ပါးစပ်ကတစ်ကြော်ကြော်အော်နေတဲ့ အတိုင်း နိုင်ငံသားချင်းတစ်ဦးစီကို ကာကွယ်မှုပေးနေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလား၊ ပေးမနေဘူးလားဆိုတဲ့ အဖြေကို ရှင်းရှင်းကြီးပြသလို့ နေပြီးဖြစ် ပါတယ်။
Posted by Country Builder at 4:52 PM No comments:
စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု (Economic Development) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို စီးပွားရေး အဆောက်အအုံတွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့
- ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံတွေရဲ့ အခြေခံဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
- နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့ တွေတိုးတက်လာမှု တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
အချိုးညီညီတိုးတက်လာတဲ့ လူနေထိုင်မှု အဆင့်အတန်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် တည်ရှိနေပြီးတော့ လူအများစုက ခွဲဝေခံစားနိုင်မှုရှိတဲ့ ရေရှည်တည်တံ့မှု ရှိနိုင်တဲ့ စီးပွားရေး ကြီးထွားမှုနှုန်း (Sustainable Economic Growth) ရှိမှသာ ဒီ Economic Development ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသုံးပြုဘို့ ကန့် သတ်ချက် ထားရမယ်။
ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာ ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းအစရှိတာတွေ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးအဆောက်အအုံတွေ ရှင်သန်လည်ပတ်နေတဲ့ ပုံစံဟာ စံနစ်ကျမှုရှိမရှိ၊ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိ မရှိဆိုတာကို ထည့် သွင်းမစဉ်းစားပဲနဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ထုတ်ယူအသုံးပြုခြင်း၊ အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုး ကောက်နိုင်တဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဖြန့် ဖြူးမှု၊ စတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အချက်များပေါ်မှာသာ အခြေခံထားတဲ့ Economic Growth ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ကျယ်ပြန့် မှုရှိတဲ့ Economic Development ဆိုတဲ့ စကားလုံး ၂ခုရဲ့ ကွာခြားချက် ကြီးမားမှုကို ကွဲကွဲပြားပြား သိလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(Adelman and Morris 1997)
Economic Development ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိစီးပွားရေး အခြေအနေကို ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေဟာ စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ် နေတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်သာ အသင့်လျော်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရောင်းချရာက ရရှိလာတဲ့ ငွေတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ကြီးထွား မှု (Economic Growth) နောင်နှစ်အနည်းငယ်ကြာသည့် တိုင်အောင် ဆက်လက်တည်ရှိနေဦး မှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ရေရှည် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာဘို့ဆိုတာကို ထားလိုက်ပါဦး။ ရေတိုစီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု ရဘို့ တင်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးလုပ်ရပါလိမ့် ဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကပဲ လက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ၀င်ငွေ၊ ထုတ်ကုန်၊ အလုပ်လက်မဲ့ နှုန်း၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု နဲ့ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု၊ စုဆောင်းနိုင်မှု အစရှိတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ Macro Economic ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ နောင်အနာဂတ်ကာလမှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပေါ်လာစေဘို့ အတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်အဖြစ် တည်ဆောက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုး ရေတိုစီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကလေးကို ရရှိဘို့ရာအတွက်ကို ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးလုပ်ဘို့ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိပ်ပြီးတော့ လွယ်လှတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ ပြည်သူတွေအမှန်တစ်ကယ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာတာကို မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Political Economy လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံရေးကို အသုံးချပြီးတော့ စီးပွားရေးကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးလုပ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်သေချာတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး အမှန်တစ်ကယ် ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင် ခိုင်မာစိတ်ချရတဲ့ အခွန်ကောက်ယူမှုဆိုင်ရာ ပေါ်လစီတွေ၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားကို တစ်ခုထဲသာဖြစ်နေအောင် သတ်မှတ်မှုတွေ၊ အတိုးနှုန်းလွတ်လပ်စွာ သတ်မှတ်ခွင့်တွေသာ မကပဲနဲ့ Institutional Reform လို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ လည်ပတ် နေမှုပုံစံတွေကိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲပစ်ဘို့ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေကတော့
- ထိရောက်တဲ့ မြေယာ နဲ့ Property ပိုင်ဆိုင်မှု ဥပဒေတွေ
- အခြေခံ အကျဆုံး လူသားတစ်ယောက်ရရှိသင့်တဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ
- အမှန်တစ်ကယ် လည်ပတ်စီးဆင်းနိုင်တဲ့ အခြေခံ အကျဆုံး အဖွဲ့ အစည်းများ
- ယထာဘူတကျကျ Consistant ဖြစ်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီချမှတ်မှုတွေနဲ့ ရိုးသားမှုရှိပြီး တော့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိတဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းများရဲ့ အဲဒီ့ပေါ်လစီတွေကို ဝေမျှပေးနိုင်မှု
- ယခုလက်ရှိတည်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာ ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ အပိုင်းတွေ
- နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ကို တံခါးဖွင့်ပေးမှု တွေအစရှိတဲ့ အချက်တွေ အချက်တွေ အများကြီး ပြောင်းလဲပြစ်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အဆိုးရဟာ အထက်ပါပေါ်လစီတွေကို ချမှတ်ကျင့်သုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်တော့ လပေါ်က ဆန်ဖွတ်တဲ့ အဖိုးအိုဆီကနေ ထမင်းဆီဆမ်းကို ရွှေလင်ပန်း နဲ့ လာပေးမှာကို စောင့်နေတာနဲ့ တူနေပါလိမ့်မယ်။
ပိုင်ဆိုင်မှု (Property) အခွင့်အရေးတွေကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းနဲ့ အဲဒီ့ကနေတစ်ဆင့်တက်ပြီး တော့ ဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်ခြင်း (Rule Of Law) စတဲ့ အချက်နှစ်ခုဟာ ရေရှည်စီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဘို့ရာအတွက် အခြေခံအကျဆုံး အချက်၂ခုဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေ ကသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ Right of Property ကို လေးစားခြင်းဟာ မိမိရဲ့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ရရှိလာတဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခံစားနိုင် တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေတိုးပွားလာစေတယ်လို့ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ အဲဒီ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံလို စီးပွားရေးအရ နိမ့်ကျနေတဲ့ (ပြောသာပြောရတာ စီးပွားရေးအရသာနိမ့်ကျတာ မဟုတ်ပါဘူုးခင်ဗျာ၊ လူတွေတောင်မှ မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင် သူတောင်းစားလိုလို သူခိုးလိုလို မျက်လုံးနဲ့ အကြည့်ခံရတော့တာပါပဲ) နိုင်ငံတွေ အတွက် အသက်တမျှအရေးကြီးတဲ့ အရာတွေပါပဲ။
Posted by Country Builder at 8:25 AM No comments:
The War that Our Rapist Army Can't Fight
စစ်ပွဲတွေဆိုတာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူညီတဲ့ ၀ိရောဓိ အမြင်တွေရှိလာတဲ့ အချိန်ကစပြီးတော့ ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ဝိရောဓိတွေဟာ ယနေ့ ယခုအချိန်အထိတိုင်အောင် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာ အရပ်ရပ်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ လူတွေအကြား မှာ တည်ရှိနေဆဲပါ။ ပြီးဆုံးနိုင်မဲ့ လမ်းစကိုလဲ မြင်နိုင်စွမ်းမရှိလောက်အောင်ကိုပါပဲ။
စစ်ပွဲ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဆက်လက်ပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာကြည့် လိုက်ရင်
အုပ်စုအဖွဲ့တွေအချင်းချင်း ကြားမှာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှု - သတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီး ခြင်းများပါဝင်သည့် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ (သို့) အုပ်စုတစ်ခုနှင့် တစ်ခု အကြား ကွဲပြားသည့် ၀ိရောဓိ
စစ်ပွဲကာလ - တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ခိုက်နေသည့် အချိန်ကာလ
စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းများ - လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေသည့် အချိန်ကာလအတွင်း အသုံးပြုကြသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ထိုနည်းလမ်းများအား လေ့လာမှု
၀ိရောဓိ - ချုပ်နှောင်ခြင်းမှာ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရန် အပြင်းအထန်ကျိုးစားမှုများ ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် အချင်းချင်း သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ
တစ်စုံတစ်ခုအား အဆုံးသတ်စေရန် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားမှု - အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် အရာတစ်ခုခုအား အမြစ်ဖြတ်ပစ်ရန်ကျိုးပန်းခြင်း - ဥပမာ - မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေး စီမံချက် အစရှိသည် - အစရှိတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မျိုးတွေ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တပ်-မတော် အဆိုးရကြီးဟာ စစ်ပွဲပေါင်းများစွာကို အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ အဆိုးရကြီး ဖြစ်နေတာဟာ ကမ္ဘာကသိကြပြီးဖြစ်လို့လာပါပြီ။ နယ်မြေအေးချမ်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ပြည်သူလူထု တောင်းစားရေးအတွက် တိုက်ခဲ့ရတဲ့ စစ်ပွဲတွေ ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေဟာ အန်ထွက်လောက်အောင်ကို အံ့မခန်းရှိလှပါတော့တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ သာသနာတော်ကြီး သန့်ရှင်းဖြူစင်ဘို့အတွက် သံဃာအတုအယောင်တွေကို လဲ ရှင်းလင်းပေးခဲ့တဲ့ ငရဲလားမဲ့ တာဝန်ကြီးကိုလဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြီး ထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့နေပါ တယ်။ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက် ရမယ်ဆိုတဲ့ မီဒီယာစစ်ပွဲကြီးကိုလဲ သောက်သုံးမကျ ပြည်သူ့ ပိုက်ဆံ ထိုင်စားနေတဲ့ ငတောင်းစား ငစနူ တစ်သိုက်နဲ့ ဆင်နွဲလို့ နေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲတွေဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အရပ်ရပ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာ ၊ နိုင်ငံတွင်းမှာသာ မက နိုင်ငံအချင်းချင်းမှာပါ ဖြစ်ပျက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သားတွေ စိတ်ဖြေကြပါလို့ ပန်ကြားလိုပါတယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုက စစ်ပွဲတစ်ခုကို လေ့လာကြည့် ကြရအောင်လားခင်ဗျာ။
ကွေကာအုပ် ထုပ်လုပ်တဲ့ အုပ်စုကြီးနှစ်ခုရဲ့ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတစ်ခုမှာ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခုပါ။
အသာစီးရသွားတဲ့ ကွေကာအုပ်ကုမ္ပဏီအသုံးပြုသွားတဲ့လက်နက်က ထုပ်ပိုးတဲ့ ဘူးကို အလျားလိုက်ထောင်ထားတဲ့ ဘူးကနေ ဒေါင်လိုက် ဘူးအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ဘူးပုံစံ ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ ဘူးပေါ်မှာ အသစ်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တစ်ခုကို ထပ်ကပ်လိုက်တယ်။ ဒါပါပဲ။
ကွေကာအုပ် ကုမ္ပဏီသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ နယ်မြေကတော့ စတိုးဆိုင်တွေထဲက ပစ္စည်းတင်တဲ့ စင်တွေပါပဲ။ ဒီစင်တွေရဲ့ နေရာကို သိမ်းပိုက်လိုက်တာဟာ စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာ ရေဒါစခန်း တစ်ခုကို သိမ်းပိုက်လိုက်တာ၊ ဆိပ်ကမ်းကြီးတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တာနဲ့ ညီမျှတယ်။ ဘူးက ဒေါင်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ပစ္စည်းတွေအများကြီးတင်လို့မရ တော့ဘူး။ ပြီးတော့ ဘူးတံဆိပ်ကလဲ လူတွေရဲ့ မျက်စိနဲ့ တည့်တည့်ကျသွားတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ Bargaining Power လို့ခေါ်တဲ့ လျှော့ဈေးနဲ့ ပေးနိုင်တဲ့ ပါဝါရှိရင် အဲဒီ့ နေရာကို တစ်ခြားပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေက ပြန်လည်တိုက်ယူဘို့ဆိုတာ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ အရာဖြစ်သွားပြီ။ ရေဒီယိုတွေ၊ တီဗီတွေထဲမှာလဲ အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်သော ဆိုတဲ့ စကားလုံးက စားသုံးသူတွေကိုစွဲဆောင်နေပြီ။ ဒီတစ်ပွဲမှာ ကွေကာအုပ်ကုမ္ပဏီ အနိုင်ရလိုက် ပြန်ပြီပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ပွဲအတွက် လက်နက်တွေ၊ နည်းလမ်းတွေက အဆင်သင့်။ နောင်ဆက်လာမဲ့ စစ်ပွဲတွေအတွက် အဆင်သင့်။
သူတို့ စစ်ပွဲတွေက ၀ါးရင်းတုတ်မသုံးပါလား။ လူမသတ်ပါ့လား။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံက လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ စစ်ပွဲကြီးတွေကို နေ့စဉ်မပြတ်ဆင်နွှဲနေကြတယ်ဆိုတာကတော့ အသေအချာ။ ငါတို့နိုင်ငံမှာကော။
ကျောက်ရူးကြီးရဲ့ ဇာတိ ကျောက်ဆည် တစ်ဝိုက်မှာ ကားကြီးကားငယ်အသွယ်သွယ်နဲ့ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေ စစ်ပွဲကြီးတွေကိုဆင်နွှဲနေကြတယ်။ ဟိုးအောက်ပြည်မော်လမြိုင်မှာထိ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေခြေဆန့်နေကြတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးနီးနီး တရုတ်တွေက လယ်မြေတွေကို ငွေပေး၊ သူတို့ဘာသာစိုက်၊ သူတို့ဘာသာ ရိတ်၊ ထွက်သမျှ တရုတ်ပြည်ကို ပြန်သယ်လုပ်နေတာ နှစ်တွေအတော်ကြာလာပြီ။ ဒါတွေဟာ ကုန်ဈေးနှုန်း တက်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုဆိုတာ လေးတန်းဦးနှောက်ရှိရင် စဉ်းစားတတ်တယ်။
၀ါးရင်းတုတ်တစ်ပြင်ပြင်၊ သေနတ်တစ်ပြပြနဲ့ ကောင်တွေ ဘုန်းကြီးသတ်မဲ့ အစား၊ မီဒီယာစစ်ပွဲတိုက်မဲ့အစား အဲဒီ့စစ်ပွဲကို နိုင်အောင်တိုက်ကြပါ့လားကွ။
မင်းတို့ ဘယ်လောက်ပဲ ဘုန်းကြီးသတ်လို့နိုင်နိုင်၊ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေနဲ့ တိုက်နေတဲ့ စီးပွားရေး စစ်ပွဲမှာ မရှုမလှရှုံးနေတဲ့ အဖြစ်ကိုတော့ ဘွင်းဘွင်းကြီး ငါတို့ မြင်နေရတယ်ဟေ့
စီးပွားရေးဆိုတာ စစ်ပွဲတစ်ခုဆိုတာကိုလဲ သတိရကြဦးနော် - - - မင်းတို့ကို မင်းတို့ ယောင်္ကျား အစစ်လို့ထင်ရင်တော့ မင်းတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသားတွေ အရှုံးကြီးရှုံးနေတဲ့ ပြည်တွင်းကစစ်ပွဲကို ၀င်နွှဲ လိုက်ကြပါဦးကွယ် - အောက်ဆွဲ အပေါင်းတို့ရယ် - -
Posted by Country Builder at 1:09 PM4comments:
Isn't that the China Style?
တရုတ်ပြည်ကြီးလိုတိုးတက်တာကိုမြင်ချင်သလား အီရတ်လိုဖြစ်သွားစေချင်သလား ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ စစ်ခွေးအစ သံယောင်လိုက် အောက်ဆွဲေ-ာမပါမကျန် သူတောင်းစားလောက် တောင် အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ ကောင်များ သုံးနေကြစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဓားပြတိုက်ဘို့ ကလွဲပြီး တစ်ခြားလောက်လောက်လားလား လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်တဲ့ အသိပညာနဲ့ စိတ်ဓာတ်အဆင့် အတန်းကလဲ မရှိကြရှာလေတော့ တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်များရဲ့ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ မြဲနေပုံကို အတော်သဘောတော်ခွေ့နေကြပုံပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ အောက်ဆွဲများ သတိမပြုမိတဲ့ (သတိမပြုမိတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သိသိနဲ့ အရှက်မရှိ ပိတ်ငြင်းတာပဲ ဖြစ်မှာပါ) အချက်တစ်ခုက မြန်မာပြည်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ၊ ၁၉၈၈ခုနှစ် ဖွတ်တက်တဲ့ အချိန်ကစတင်ပြီးတော့ တရုတ်လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးလာခဲ့တယ်ဆို တဲ့ အချက်ပါပဲ။ အနှစ်၂၀တာကလအတွင်းမှာ ခွေးသူတောင်းစားများ တစ်ကယ်တမ်းအသုံး ကျခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးဟာ ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ချုပ် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးလက်ခံနေကြမယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ရှိရင် သိဘို့ကောင်းပါတယ်။
ပိုပြီးဆိုးတဲ့အချက်ကတော့ စီးပွားရေး ကျရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းဟာ အမေရိကန် စီးပွားရေး ပိတ်လို့ပါလို့ တွင်တွင်အော်ခြင်းပါပဲ။ ဆင်သေကြီး တစ်ကောင်လုံးတွေ့နေတာတောင် ဆိတ်သားရေနဲ့ ဖုံးပြီး သေနေတာ ဆိတ်ပါ၊ ဆိတ်ပါ အော်တာ ကျက်သရေတုံး အရှက်မရှိတဲ့ အောက်ဆွဲတွေပါပဲ။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ပုံစံပြောင်းလဲခဲ့ပုံကို အနည်းငယ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင် လားခင်ဗျာ။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဟာ ၁၉၇၈ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းဝန်းကျင်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အခွန်လျော့ပေါ့ကင်းလွတ်ခွင့်တွေပေးထားတဲ့ စီးပွားရေး အထူးဒေသဇုံ ၄ခု (ဂွန်ဒေါင်းပြည်နယ်ရဲ့ ရှန်ဇန်း၊ ကျုလိုင်နဲ့ ရှန်တိုး စီးပွားရေးဇုံတွေနဲ့ ဖူးကျင့်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဈှမန် (Xiamen) စီးပွားရေးဇုံ) နဲ့ စတင်ခဲ့ပြီးတော့ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ ထူထောင်ခွင့်ပြုစေခဲ့ပါတယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံမှာရော ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတွေမရှိကြဘူးလားခင်ဗျာ)
အထူးအခွင့်အရေးတွေအနေနဲ့ ကတော့ ဂွန်ဒေါင်းပြည်နယ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာ ရရှိလာတဲ့ အခွန်ငွေများအတွင်းက တရုတ်ပြည်မအစိုးရကို တစ်နှစ်ကို ယွမ် သန်း ၁၀၀၀ သာပေးသွင်းရပြီးတော့ ဖူးကျင့်ပြည်နယ်ကိုတော့ တစ်နှစ်ကို ယွမ် ငွေ သန်း၁၅၀ ပြည်မအစိုးရ ကအခွန်လျော့ပေါ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့စီးပွားရေးဇုံအတွင်းမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း များအနေနဲ့ ကတော့ ကုန်သွယ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ ဒေါ်လာအစရှိတဲ့ ငွေမာတွေကို ရာနှုန်းပြည့် ကိုင်ထားနိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ခြားပြည်နယ်တွေမှာတော့ ၂၅% အထိသာ ငွေမာရရှိပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေပြမှုကနေ ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့ ငွေဖောင်းပွမှုနဲ့ အသုံးစားရိတ်ကြီးမြင့်လာမှုတွေကိုတော့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်တင် သွင်းခွင့်ပြုခြင်းကနေ လျော့ပါးစေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ထဲမှာ ဒီလိုမျိုး စံနစ် ၂ခုဖြစ်ထွန်းနေခြင်းဟာ အကျင့်ပျက် ချစားခြင်းကို တွန်းအားပေးတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်စီးပွားရေး ပညာရှင် ၀ူကျင့်လျန်က သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ဈေးနှုံး ၂မျိုး ဖြစ်နေတာ၊ ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းဟာ ၂ခုဖြစ်နေတာအစရှိတာတွေဟာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး အတွက်သာမက ကိုယ်ကျင့်တရားအတွက်ပါဘယ်လိုမှကောင်းမွန်နိုင်တဲ့ အရာတွေမဟုတ် ဘူးဆိုတာကို ၀ူကျင့်လျန်က သုံးသပ်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ ဈေးနှုန်း ၂မျိုးတွေ တော်တော်များသား၊ ငထိုင်းဆိုတဲ့ကောင် ပထွေးတော်တွေကို ပြောပြပေးပါ့လား၊ ဒါမျိုးတွေက မကောင်းဘူးလို့)
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့ စီးပွားရေးဇုံအတွင်းက ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတွေ သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန် အစရှိတာတွေကိုတော့ လိုင်စင်အစရှိတာတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တော်တော်တူတာပဲ) အဲဒီ့လိုင်စင်နဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေဟာလဲ အကျင့်ပျက်ချစားစေခြင်းရဲ့ အရင်းအမြစ် တစ်ခုပါပဲတဲ့။
ဒါပေမဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ လိုက်နာခဲ့မှုတွေကတော့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေအတွင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်မှုမျိုးတွေဟာ ပါတီအတွင်းရေးမှူးတွေပြုလုပ်တော့တာမဟုတ်ပဲနဲ့ ပညာတတ်မန်နေဂျာ တွေနဲ့ ပြုလုပ်ခြင်းအစရှိတာတွေ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွင်းက အရေးပါတဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ သစ္စာရှိ လူဟောင်းကြီးတွေနေရာမှာ လူငယ်ပညာတတ်တွေနဲ့ အစားသွင်း လှဲလှယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်စေခဲ့ခြင်းပါပဲ။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေဟာ သင်ခန်းစာယူမယ် ထောက်ပြမယ်ဆိုရင်အများကြီးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ချက် နှစ်ချက်ခြင်းစီကိုပဲ ဆွေးနွေး သွားပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေတာ တရုတ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုမျိုးလား၊ တရုတ်လမ်းစဉ်ကို လိုက်လို့ ရမလားဆိုတာကတော့ မေးစရာ တစ်ခြားမေးခွန်း တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ လိုက်လို့ မရဘူးလို့ပဲ၊ လိုက်လဲ မလိုက်ချင်ဘူးလို့ပဲ ဆိုခြင်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ မပြောခင် အောက်ဆွဲေ-ာမများ တစ်ခုစဉ်းစားပေးကြပါခင်ဗျား။ အထက်က တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး စစဖွင့်ခြင်း ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ပေါ်လစီတွေကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည် တံခါးဖွင့် စီးပွားရေး အနှစ်၂၀ကျော်ကြာတဲ့ အခါမှာ ကျင့်သုံးနေကြပြီးလားလို့။ မြန်မာပြည်က ကုမ္ပဏီတွေကိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ငွေမာဟာ ၁၀၀% ဖြစ်ပြီလားလို့ ခွေးသူတောင်းစား ပထွေးများကို မေးကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျား။
ဒါတောင်မှ မမေးနိုင်ပဲနဲ့ အာဏာလေးမပြုတ်တာကိုပဲ ကြည့်ကြည့်ပြီး တရုတ်ကို ဥပမာပေးပါ၊ ဥပမာပေးပါ ထပ်ကာထပ်ကာပြောလာရင်တော့ တရုတ်ပြည်မှာ လာဘ်စားရင် ပေါင်ချိန် ဇာတ်လမ်းတွဲထဲကလို ခေါင်းမှာ ပျဉ်ပြားစွပ်ပြီးတော့ ကွပ်မျက်ပစ်တယ်လို့ ထပ်ပြီး ဥပမာပေးချင်ပါတယ်။ အောက်ဆွဲေ-ာမ ခွေးသူတောင်းစားတွေ တရုတ်လို တစ်ကယ်လိုက် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ခွေးသူတောင်းစားကော အောက်ဆွဲပါမကျန် လာဘ်စားမှုနဲ့ သင်းကွပ်ပစ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ခေါင်းကို စွပ်စရာ ကြိုးတစ်ချောင်းအရင်ရှာထားဘို့ အကြံပေးရင်း ဒီတစ်ပတ်ခဏနားဦးမယ်ခင်ဗျား။
Posted by Country Builder at 1:35 PM2comments:
ကျွန်တော်တို့ကို countrybuilders2008@gmail.com ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခု ပေးပို့လိုရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ မှတ်ချက် တစ်ခုခု ပေးပို့လိုရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီပေးဘို့ ကုလသမဂ္ဂကို တောင်းဆိုရန် အောက်ပါလင့်ခ်က နေတစ်ဆင့် မေးလ်ပို့ပေးကြပါ။
စစ်ခွေးတွေ အူသံ စမပေးခင်မှာ ဒါကို အရင်ဖြေပါ။
ကပ်ဆိုးမျိုး ဘယ်ခောတ်ဘယ်ကာလက ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးပါသလဲ။
မင်းတို့အဘတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုတွေဟာ သံသရာတစ်လျောက်ဆပ်လို့
ဖြေနိုင်ရင် ကြိုက်သလောက် ဆက်အူနိုင်ကြပါပြီ
အမေ နှမ၊ ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်း မိုက်ရိုင်းစွာ ဆဲဆိုသဖြင့် အောက်ပါ လူယုတ်မာများအား Ban ပါသည်။
မောင်ကောင်း (ခ) အမျိုးဖျက်သူကြောင့်
Nay Nat Nwe
Pho Ta Yoke
Ko Sher Shay
ကျွန်တော်စုဆောင်းထားတဲ့ စာအုပ်များကို ဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ကြပါတယ်။
Cambridge Data Books
ISO for system Providers (II)
ISO for System Providers (I)
Helping Griefing People (1)
Helping Griefing People (2)
Trees on volume of air